Soo dejisan Samsung Link 2.0.0.1603091618 – Vessoft
Samsung Link – software ah si ay u gudbiyaan oo la maareeyo xogta ka aaladaha fog. software wuxuu isticmaalaa noocyo kala duwan oo storages daruur oo bixiya helaan si user in ay files eegin goobta. Samsung Link synchronizes qalab aad iyo u saamaxaaya in ay meel fog laga dhirtuba photos, video loo maqli karo iyo muusiko dhegayso oo aan xiriir dheeraad ah. software The kuu ogolaanayaa inaad ku shuban xogta adeegyada web kala duwan iyo wadaagaan files la isticmaala kale. In adeeg gaar ah Samsung Link si toos ah badbaadiyay sawir iyo video qaaday by camera la isticmaalayo qalab Samsung oo taageero ah technology Wi-Fi.
maamulka file Remote
Saves xogta ee kaydinta daruur
Loading xogta adeegyada web kala duwan
Soo dejisan Samsung Link
Faallo ku saabsan Samsung Link
Samsung Link Xirfadaha la xiriira
Tool si ay u tababaraan makiinada soonka on keyboard ah. Software ka kooban yahay qaabab ka duwan yihiin in loo qaybiyo casharada in la xasuusto khariidad muhiim ah.